WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 13-KA JANNAAYO 2018-KA
Saturday January 13, 2018 - 09:56:23 in Wararka by Mogadishu Times
GUDDIGA DOORASHOOYINKA OO GO'AAN KASOO SAARAYA DIB U DOORASHADA KURAASTA BANAAN Guddiga madaxabannaan ee door ashooyinka Qaranka ayaa sheegay in Maalinta Axadda ee soo socoto ka jaw aabi doonaan warqad kasoo gaartay maxkamadda sare ee dalka.
GUDDIGA DOORASHOOYINKA OO GO'AAN KASOO SAARAYA DIB U DOORASHADA KURAASTA BANAAN Guddiga madaxabannaan ee door ashooyinka Qaranka ayaa sheegay in Maalinta Axadda ee soo socoto ka jaw aabi doonaan warqad kasoo gaartay maxkamadda sare ee dalka. Qoraalka asi ayaa ahaa inay hakiyaan doorasha da kuraasta bannaanaatay ee xildhiba annada golaha shacab ka, waxaana Xali imo Yareey ay shaacisay inay kulan ku yeelaan doonaan Magaalada Muqdisho.
Marwo.Xaliimo Yareey, oo ku sugan M Dhuusomareeb ayaa saxaafadda u sheegtay in xubnaha guddiga ay ku shir ayaan M/Muqdisho, islamarkaana lagu wargeliyay inay shirkaasi kasoo qeyb ga laan maaddaama ay Muqdisho ka ma qan yihiin. Sidoo kale Guddoomiyaha guddiga madaxaba nnaan ee doorasho oyinka ayaa sheegtay in codsi uu kaga yimid guddoonka golaha shacabka, ka asi oo ah in la boobsiiyo doorashada afa rta kursi ee ka bannaanaatay golaha shacabka.
"Golaha shacabka ayaa inoo soo jee diyay Ducement oo ah inaan soo buux ino kuraasta bannaa naatay, balse wa xaan dorraad warqad ka helnay maxk amada sare oo ah joojinta iyo kasoo ja waabida warqadooda”.
"Maalinta Axadda ayaan ku shiri doo nnaa Muqdisho, waxaana kasoo jawaa bi doonnaa warqada naloo soo diray ee ah inaan joojinno doorashada kuraasta bannaan, maalinta axada ayaana jawa abta oo buuxdo soo saari doonnaa”. Ay ay tiri Xaliimo Yareey.
MIDOWGA AFRIKA OO KA DALBADAY TRUMP INUU RAALI GALIN KA BIXIYO HADAL GEF AH …
Midowga Afrika ayaa ugu baaqay Madaxweyne Donald Trump inuu ka laabto hadal gaf ahaa oo la sheegay inuu u adeegsaday wadammada Afrika islamarkaana uu raaligelin hadalkaasi ka bixiyo.
Bayaan si adag loo soo qoray ayuu Midowga Afrika ku muujiyay sida uu uga caraysan yahay hadal lada la sheegay, kuwaas oo sharaf dil ku ah qadarinta Mareykanka uu siin jiray kala midab duwan aanshiyaha.
Wakiilada Midowga Afrika ee ku sugan caasimada Mareykanka ee Washington, ayaa muuji yay sida ay "uga xun yihiin, ugana careysan yihin oo ay u diidan yihiin" hadalkii la sheegay inuu ka soo yeeray Trump, taasi oo ay ku sheegeen inay xaqiijineysa in maamulka Mareykanka uu si qalad ah u fahmay qaarada Afrika.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Botswana ayaa u yeertay safiirka dalkeeda ee Maraykanka, waxa ayna hadalka madaxweyne Trump ku tilmaantay mid aanan loo dulqaadan karin oo qeyru mas 'uulnimo ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Botswana ayaa sheegtay sidoo kale inay rajeyneyso in dad ka Mareykanka aysan la qabin madaxweyne Trump fikradaan ka dhanka ah dalalka Afrika.
Dr Pelonomi Venson Moitoi, ayaa u sheegtay BBCda in erayga uu adeegsaday madaxweyne Trump uu ku yahay gef qaarada Afrika.
Hadalada lagu eedeeyay inuu sheegay Trump ayaa yimid xili xildhibaanada xisbiyada Jamh uuriga iyo Dimoqoraadiga ee Aqalka Congresska ay maalintii khamiista xafiiskiisa ku booqdeen Tru mp si ay uga wadhadlaan arrimaha muhaajiriinta, xiligaas oo ahayd markii uu Trump hadalada gefka ah jeediyay.
Balse Trump ayaa fariin uu kusoo qorey Twitterkiisa waxa uu ku sheegay in erey bixinta uu isti cmaalay ay ka duwanayd tan ay warbaahinta faafisay.
WASAARADDA AMNIGA OO FAAH FAAHI SAY DILAL KA DHACAY SH/HOOSE
Wasaaradda Amniga Dowladda Fe deraalka Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah waxa ay ka bixisay dilal qo rsheysnaa oo ururka Alshabaab todob aadyadii la soo dhaafay ka geysteen de ga ano ka tirsan Koonfur Galbeed, gaar ahaan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxa ay sheegtay Wasaaradda Amn iga Soomaaliya in ururka AlShabaab ay boobeen xoolo fara badan oo ay lahaay een dad shacab ah, oo aan waxba gal absan. Afhayeenka Wasaaradda Amni ga C/casiis Xildhibaan ayaa sheegay in Shabaab sidoo kale ay dileen Shan ru ux oo uu sheegay in ay ku eedeeyeen inay la la shaqeynayeen DFS iyo Dow lado shisheeye. Wuxuu sheegay Dowlad da Federaalka inay u tacsiyadeyneyso dadkaasi la dilay oo Hay’adaha amma anka ay ku howlan yihiin sidii ay warbaa hinta ugu soo bandhigi lahaayeen mag acyadooda.
Md.C/casiis Xildhibaan ayaa tilmaam ay in Dowladda Federaalka aysan marn aba raalli ka aheyn in qof shacab ah dhii giisa la daadiyo, gacantana ku soo dhigi doonto raggii ka dambeeyay dilal kaasi.
Ugu dambeyntii shacabka Soomaali yeed ayuu ugu baaqay inay la shaqeey aan Hay’adaha am maanka, si ay u fudu daato in gacanta lagu soo dhigo ragga dilalka geysta, iskuna daya in ay baxs ad aan. Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji oo sannadkan bilow giisa la hadlay warba ahinta Dowladda ayaa sheegay Shaba ab sanadkii 2017 inay kordhiyeen dilal ka iyo qaraxyada ay ka geysteen, balse sannadkan ka maamul ahaan ay ka hor tagi doonaan weer arada Shabaab.
JUBBALAND OO KA HADASHAY DAGAALKA DIIF
Maamulka Jubbaland ayaa faah faa hin ka bixiyay Dagaal Ciidamada Jubba land iyo xoogag ka ti rsan ururka Alsha baab ku dhexmaray shalay degaanka Diif oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoo se. War Shabaab ay ku soo qoreen bar aha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegeen Da gaalka ka dha cay degaanka Diif in ay u suuragashay Dagaalyahanadooda in ay la wareega an gac an ku heynta degaanka, ayna dil een Ciidamo ka tirsan Jubbaland.
Sarkaal u hadlay Jubbland ayaa she egay in dagaalka uu jiro balse ururka Alshabaab aysan la wa reegin degaanka, haddana degaanka ay ku sugan yihiin Ciidamada Jubbaland. Wuxuu sheegay da gaalka ka dhacay degaanka Diif in uu geystay khasaare kala duwan, wuxuuna tilmaamay khas aaraha dhankooda soo gaaray inuu kooban yahay, balse Shab aab ay ka dileen dagaalyahano badan.
Sidoo sarkaalkan ayaa beeniyay war ay baahiyeen warbaahinta qaarkood, kaasi oo ahaa in Taliyihii Booliska Jubbaland nolol iyo geeri inaan midna lagu heyn, wuxuuna tilmaamay Taliyaha inuu nool yahay, kuna sugan yahay magaalada Kismaayo
Wasaaradda amniga gudaha xuku umadda Soomaaliya ayaa khamiistii shaacisay in cafis loo fid inyo siyaasiyiin ta mucaarad ku ah dowladda Soom aaliya,waxaan wsaraddu ay sheegtay in xub nahan cafiska loo fidinayo ay qalqal galin ku wadan dalka.
Afhayeenka Wasaaraddaas C/casiis Xildhibaan oo Saxafadda kula hadlay M/Muqdisho ayaa she egay in dowladda Soomaliya ay cafis u sameyneyso siyasi yiin dowladda ugu eedeysan qaran dum is,islamarkaana hay’adaha ammaanka ee dowladdu ay isku afgarteen in siy aasiyiintan lala xisaab tamo haddii ay dhacdo in mar kale ay soo celiyaan fal ka hadda ay ku eedeysnayeen.
Afhayeenka Wasaaradda amnigu mu usan carrabaabin siyaasiyiintan uu she egay in dowladdu ay cafisk u fidiney so,mana uusan sheegin waxa dhabta ah ee ay ku eedeysnyihiin xubnahan mar ka laga tago in lagu sheegay qarandumisyaal.
Horay dowladda Soomaaliya waxaa ay u sheegtay in tillaabo ay k qaadeyso siyaasiyiinta dow ladda Mucaradsan ee dhaliila waxqbadka dowladdaa Sooma aliya,waxaana ay dowladdu weerarty siyasiyiin uu ka mid ahaa siyasiga C/rax maan C/shakuur Warsame oo illaa had da ay daba dhe eraatay dacwaddiisa, siy aasiyiinta iyo dadka daraaseeya arima ha siyaasadda ayaa aaminsan in dowladdu ay caburineyso fikirka xorta ah ta asi oo ay ku sheegayaan in meesha ay ka baxayso in dowladda loo tilmamo qal adaadka ka dhaca,balse haddii dowlad du weerarto siyasigii dhaliilaba ay mee sha ka baxayso in dowladdu ay ogaato qaladaadkeeda.
CIIDAMADA AMMAANKA D/ KAARAAN OO LA WAREEGAY QARAX KA DHACAY GUDAHA GURI LAGU DIYAARINAYAY QARAX
Waxaa habeen hore saqdii dhexe Qarax xoog leh uu ka dhacay guri ku ya ala D/Kaaraan ee G/Banaadir, qaraxaas oo la sheegay in lagu diyaarinayay Guri gaasi oo ku dhow Xarunta Degm adaas.
Saraakiisha ammaanka D/Kaaraan ay aa sheegay inay maqleen dhawaaqa Qarax culus kadibna ay la wareegeen Gurigii qaraxa ka dhacay iyo dad ku sug naa Gurigaasi.
Wararku waxay sheegayaan in dadkii daganaa Gurigaasi ay qaarkood ka bax sadeen ka hor inta aysan Ciidanka soo gaarin, balse qaar ka mid ah ayaa la qa btay, sida ay sheegayaanwaarku iyo doo aysan waxdhibaato nafed ah gaarin dadka ku sugnaa guriga iyo hareerihiisa
sidoo kale waxaa deg madaasi ka jira Maleeshiyaad ka dhac ka geysata
QATAR OO CABASHO KA DHAN AH IMAAR AADKA CARABTA U GUDBISAY QARAMADA MIDOOBEY
D/Qatar ayaa cabasho ka dhan ah Ima araadka Carabta u gudbi say Golaha Ammaanka ee Qar amada Midoobey, iyadoo ku eedeysay inay ku soo xadgu dubtay hawadeeda.
Sida uu baahiyay Telefishinka Al Jazeera ee xaruntiisu tahay Doxa, Waki ilka joogtada ee Qatar u fadhiya Qara mada Midoobey ayaa cabashada u gu dbiyay Golaha Ammaanka, isagoo she egay in diyaarad dagaal oo laga leeyah ay Imaaraadka Carabta ay ku soo xad gudubtay Hawada Qatar.
Cabashadan ayaa waxaa gudbiyay Wakiilka joogtada Qatar u qaabilsan Q/ Midoobey Alya Ahmed Al Thani, waxaa na uu u gudbiyay Xoghaya ha Guud ee Q/Midoobey Anto nio Gute rres.Waxaa uu ku eedeeyay Imaaraadka inay si cad ugu soo xadgudbeen dowladda Qatar, xuduudaheeda iyo amniga dhulkeeda, sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah.
Fariinta Cabashada ee Qatar gudbisay ayaa lagu sheegay in dowladda Qatar ay qaadi doonto wax walba oo lagama maarmaan ah, si ay u difaacdo hawade eda, xuduudaheeda iyo amniga Qaran ka.
Wakaalada Wararka Qatar ee loo ya qaano QNA ayaa sheegtay in xadgudub ka lagu sameeyay hawadooda ay dha cday 21kii bishii December ee sanadkii hore 2017. Horaantii bishii June ee
UNICEF KU BAAQDAY IN LA CAAWIYO CARUURTA AY HOY LA’AANTA AY KU HEYSO DULEEDKA MUQDISHO
Hay’adda QM u qaabilsan arrimaha Qaxootiga ee UNICEF ayaa Khamiistii sheegtay in 21 deg aan oo ku yaallay dul eedka Muqdisho, oo hoy u aheyd dad ka badan 4,000 oo qoys la burburiyay, hadana dadkaasi ay yihiin kuwo xaalad adag ku jira. UNICEF ayaa sheegtay dadka dhiba atada ay qabsatay in ay u badan yihiin haween iyo carruur kuwaas oo yimid bi lo yar ka hor, kadib markii ay safar dhe er u soo so cdeen si ay uga ba xsadaan abaarta iyo colaadaha., waxay na sheeg tay dadkaasi in guryahooda la ga saaray iyada oo aysan jirin ogeysiis hore.
Waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah dadka iyaga oo gur yahooda jiifa mar qura ay ka war heleen Ciidamo hubeys an iyo Cagafcagaf guryahooda dumin eysa, taasina ay sabab tay in cauur badan ay noqdaan Hoy la’aan, Waxbar asho la’ aan, iyo xitaa in agabkoodii waxbara sho halkaasi ay ku waayaan.
UNICEF ayaa sheegtay in howlgalay aasheeda qeybta caafimaadka ay la kul meen 35 qof oo isu gu jira cauur, Waaye elo, iyo dad naafo ah, kadibna ay u sam eeyeen gargaar caafimaad, si wax loo ga qabto xaaladahooda caafimaad dar ro.Kiisaskan khasabka ah ayay sheegt ay in ay saameyn ku yeesheen in ka badan 3,000 oo carruur ah, Afar dugsi oo la bu rburiyey; Xarun Carruurta ay ku cayaara an oo u dhameystiran qalabka ay caruur ta ku cayaaraan. "Qoysaska la xayiray ayaa u soo guuray dugsiyada iyo dhi smayaasha dadweynaha xerya ha kale ee barskacayaasha oo ay la soc daan qaar ka mid ah carruurta ku nool banna anka ama waddooyinka, iya da oo aan la hayn hoy Carruurta iyo qo ysaskoodu wa xay u baahan yihiin tage ero deg deg ah oo ay ka mid yihiin adee gyada caafi maadka iyo nafaqada, biyaha nabdoon, fayadhowrka, waxbar ashada iyo kaalmo oyin kale”. Ayaa la gu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay UNICEF.
Ugu dambeyntii UNICEF ayaa ka cod satay mas’uuliyiinta in ay hubiyaan in dhammaan carruurta ay dhibaatadu saa meysey si buuxda u badqabaan, lana dejiyo meelo ammaan ah, si dhibaato oyin kale aysan ula soo dersin.
SARKAAL SHABAAB KA TIRSANAA OO CIIDANKA DOWLADDA ISKU DHIIBAY
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ee Degmadda Buu rhakaba Gobolka Baay, ayaa soo ban dhigay sarkaal sare oo katirsaa Alsha baab oo dhawaan isa soo dhiibay.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Ibra ahim Xasan Cali, ayaa Alshabaab ka tir sanaa muddo dheer, isagoo sheegay in Shabaab dhexdooda uu ka jiro Khilaaf aad u xooggan. Wuxuu kaloo sheegay Shabaab in ay bilaabeen in dhexdooda ay is dilaan, kadib markii ay kala shaki yeen, waxaana uu xu say in isaga uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan. Isa soo dhiibista Sarkaalkan Alshaba ab ka soo goostay ayaa ku soo aadeysa xilli dhowaan Madaxweynaha Soomaali ya uu markale ku celiyay in cafis loo fidi yay dhalinyarada Shabaab ka soo goo saneysa.
DOWLADDA OO GAALKACYO KA HIRGELINA YSA MAXKAMADDA C/Q/SIDA
Wafdi uu hoggaaminayo Taliyaha Cii damada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehliyeen xi ldhibaanada Labada Aqal ee laga soo doortay deeganada asi, Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaa shaandhigga iyo masuuliyiinta Maxka madda Ciidamada Qalabka Sida ee So omaaliyeed ayaa u jooga M/ Gaalkacyo dhameystirka dadaalka nabadeed ee do wladda dhexe ee Soomaaliya ka waddo magaaladaasi.
Ciidama ka tirsan xoogga dalka So omaaliyeed oo ka madax baxnaan Uru ruda 21aad iyo 54aad ee ka howlgala Maamulada Galmudug iyo Puntland ay aa lagu wareejiyay amniga magaalada iya goo wixii ay u baahdaan ee deeg ah ay ka heli doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya islamar kaana ay hadda heleen gunnooyin iyo agab ciidan oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku war eejisay sida uu warbaahinta Dowladda u sheegay Guddoomiyaha Maxkamad da Darjada 1aad ee Ciidmada Qalabka Sida.G/sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Gaalkacyo waxaa ka jiray ciidama beeleedyo, maleeshiyaad aan ka amar qaadan labada maamul ee halkaas ka jiro, ka ganacsiga maandooriyaha nuuc yadiisa kala duwan oo laga keeno magaal ada meel ka baxsan, waxaana arrim ahaasi dhan oo is biirsaday ay sabab een isku dhacyada ciid amadaasi oo loo ti in jiray qabiilada iyo maamulada hal kaasi ka jiray balse taasi waa la soo afja ray oo cutubyadii ugu horreeyay ee Ciid ama ka tirsan xoogga dalka Soomaaliye ed ayaa la geeyay Magaaalada.
Guddoomiye Shuute ayaa sheegay Maxkamad Ciidan oo heer dowladda dhexe ah kana madax banaan maamu ladaasi laga hirgelinayo magaalada, taa si oo la shaqeyn doonta ciidamada isku dhafka ah ee u madax banaan howlah ooda, isaga oo tilmaamay in Maxkama dan ay qaadi doonto dacwad kasta.
Gaalkacyo ayaa la filayaa in ay marti geliso wafdi Madaxweyneaha Jamhuuri yadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu hugaaminayo oo socdaal loogu magac daray socdaalka nabadda ku maraya degaano badan oo ka tirsan G/da dhexe
DOWLADDA SOOMAALIYA OO MUSHAARKA KA JOOJINEYSA QAAR KA MID AH SHAQAALAHEEDA.
Shirka Golaha Wasiirrada Xukuu madda Soomaaliya ayaa khamiistii loo ga hadlay qodobo dho wr ah,waxaana ka mid ahaa waxyaabaha la isku soo qa aday qorshe iyo tira koob uu Wasiirka shaq ada iyo shaqaalaha hor geeyay gol aha wasiirrada. Wasiirka Warfaafinta Xu kumada Soomaaliya C/Raxmaan Cum ar Cismaan Yariisow, oo shir jaraa'id qa btay ka dib kulanka Golaha wasiirrada ay aa u sheegay Warbaahinta in Wasiir ka shaqada iyo shaqaalaha uu kham iistii golaha wasiirrada hor geeyay liiska shaq aalaha rayidka ah ee dowlad da,t irade oda,tayadooda iyo shaqada ay qa btaan. Waxaa uu sheegay in Shaqaala ha u diiwaangeshan Wasaaradda shaq ada iyo shaqaalaha ay ka badanyihiin 5,000 oo shaqaale ah,waxaana uu xus ay in ha dda dowladda ay mushaarka ka joojine yso shaqaale diiwaangeshan oo aan shaqeyn kuwaas oo uu sheegay in ay mushaar ka qaataan dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya C/ Raxmaan Ducaale Beyle ayaa dhamaa dkii Bishii June ee Sanadkii hore sheeg ay in laga billaabo 1da July 2017 dowl adda ay joojineyso mushaarka la siiyo shaqaalaha ka shaqeeya meelo kale una diiwaangeshan dowladda.
Waxaana uu Dadkaas ku tilmaamay in ay dhibaato ku yihiin hannaanka sugn aanta Misaaniyadda dowladda sidaas darteedna dabagal lagu sameynayo
AGAASIMAHA IDAACADDA CODKA MU DUG OO LAGU XIRAY GAALKACYO
Wararka inaga soo gaaraya M/Gaalkacyo ee xarunta G/Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in duhurnimadii shalay lagu xiray Wariye Hanad Cabdi Faarax oo ka tirsan Idaacadda Codka Mu dug.Wariye Hanad ayaa ah Agaasi maha Idaacadda Codka Mudug, oo xar unteeda ay tahay M/Gaalkacyo ee gaar ahaan qeybta Galmudug.
Ciidamo hubeysan watana gaadiidka Dagaalka oo ka tirsan Galmudug ayaa Wariyaha ka qabtay meel ka mid ah Ma gaalada, isaga oo ku guda jira howlihi isa maalmeedka ee shaqo. Warkan Id aac adda Risaala waxaa u xaqiijiyay Wa riye Maxamed Muxudiin (Saxansaxo) oo ka tirsan shaqaalaha Idaacadda Cod ka Mudug, kana mid ah wariyeyaasha Risaala uga soo warama Gobolkaasi, How laha shaqo ee Idaacadda ayaa si caadi ah u socda.
wariye Hanad Cabdi Faarax ayaa ku xiran saldhiga dhexe ee magaalada Ga alkacyo, ilaa hadda si dhab ah looma oga sababta ka dambeysa xariga Wari yaha.
SARAAKIISHA DANAB OO SHEEGAY IN AY BURBURIYEEN SALDHIGII UGU WEYNAA SHABAAB EE SH/HOOSE
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay Ciidamada Kumaandoos ka Soomaaliya ee Danab in ay bur bur iyeen xaruntii ugu weyneyd ururka Alshabaab ay ku lahaayeen Gobolka Sha be ellaha hoose. Degaanka Leego ee go bolka Shabeellaha Hoose oo Alshaba ab ay ku lahaayeen baro kontorool ayaa la bur buriyay kadib howlgal halkaasi ay ka fuliyeen ciidamada Danab.
Taliyaha Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Danab G/sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo la hadlay Idaa cadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in howlgal gaar ah ciidamada Kum aandooska Soomaaliya ay ka fuli yeen degaanka Leego ay ku bur buri yeen saldhigyo Alshabaab ku lahaay een halkaasi
G/sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waxa uu sidoo kale sheegay in ciida mada Kumaandooska ay howlgalka ku dileen xubno ka tirsanaa Alshabaab ku waasi oo tiradooda uu ku sheegay 10 Dagaalame.
Sidoo kale waxa uu sheegay Tali yaha saldhigyada ay ciidamada bur buri yeen in Alshabaab ay ku qaadi jireen lacago loo yaqaano Zakawaadka.
Taliyaha ciidanka Danab waxa uu u gu dambeyn sheegay in ciidanka Kuma andooska Soomaaliya ay xoojiyeen how lgalada lagula dagaalamayo ururka Alshabaab, si guud ahaan dalka looga sa aro.
KENYA OO WAR KA SOO SAARTAY DAGAA LKA CEELWAAQ
Ciidamada xoogga dalka Soomaal iyeed iyo Ciidanka Kenya ayaa aroortii hore ee shalay oo Ji mco aheyd waxa ay ku dagaalameen degmada Ceelwa aq oo ka tirsan Gobolka Gedo. Dagaal kan wuxuu yimid kadib markii 2da Cii dan ay kala shakiyeen, maadaama Ciid anka Kenya oo wata 3Gaari oo nuuca dagaalka, kana babanayeen calan ma dow ay gudaha u soo galeen Magaala da, iyada oo aysan jirin wax ogeysiis ah. Xuseen Deyr Cadaawe oo ka tirsan saraakiisha Ciidamada xoogga dalka oo la hadlay Idaacadda Risaala ayaa xaq iijiyay in dagaalka uu ku geeryooday Gaa shaanle Dhexe Maxamed Aadan Yuu suf (Ilka Case) oo ka mid ahaa Saraa kiisha Ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan Gobolka Gedo.
Kenya oo war ka soo saartay dagaal kan ayaa waxa ay sheegtay Ciidankoo da in aysan qeyb ka aheyn dagaalka, ay na habeen hore Ciidamo iyaga ka tirs an ka bixin xerada ay ku leeyihiin xudu udka ay la wadaagaan Soomaaliya.
"Ciidanka Kenya wax lug ah kuma lah an, dagaalka ka dhacay Ceelwaaq, Cii damadeena ma ay san tagin agagaarka Ceelwaaq, iska daa in ay gudaha u gal aan, waxaan wadnaa baaris la xiriirta wararka sheegaya in Ciidankeena ay qeyb ka noqdeen dhacdadan.” Ayuu yiri Sarkaal u hadlay Ciid anka Kenya.
Warkan ka soo baxay Dowladda Ken ya ayaa u muuqda mid ay isaga indha ti reyso weerarka kha saaraha dhaliyay ee Ciidankooda ay ku qaadeen Ceelwa aq, sida ay inoo xaqiijiyeen dadka dega anka oo inoo sheegay in Ciidanka Ken ya kuwa weerarka geystay.
GUDDOOMIYAHA GUDDIGA DOORASHOO YINKA QARANKA OO DHUUSAMAREEB LAGU XIRAY.
Guddoomiyaha Guddiga doorasho oyinka Madaxabanan ee qaranka Soo maaliya Xaliimo Ismaac iil "Xaliimo yar ey” ayaa xalay lagu xiray M/Dhuusamar eeb ee xarunta G/Galgaduud ee Som. .
Warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in Xaliimo Yarey ay dhuusam areeb ka qabtayn Ci idamada Ahlusunna waxaana la sheegay in la geliyay Xabsi guri, oo ku yaala dhuusamareeb.
Ciidamo ay wadatay ayaa sidoo kale la sheegay in hubka laga qaaday sidoo kal ane la xiray. Xa liimo Ismaaciil "Xali imo Yarey” oo lala xiriiray ayaa Telepho ne’lkaku sheegtay in aysan ka hadlayn xerageeda, balse Saraakiil ku sugan Dhuusamareeb ayaa arintaan u xaqi iji yay warbaahinta
Lama oga sababta ka dambeysa xer agga Xaliimo Yarey, balse waxa uu xera geeda ku soo aada yaa xili ay Shalay ka degtay M/Guriceyl ee G/Galgaduud.
Sidaan oo kale Ahlusunna ayaa habeen hore 5 qof oo Dumar ah ku xirt ay M/Dhuusamareeb ee Xarunta Galmu dug.
MADAXWEYNE FARMJO "MAAMUL GOBOLEEDYADA WAXAAN KALA HADLI DOONAA XOOJINTA NIDAAMKA FEDARAALKA”
Madaxweynaha JFS Md M.C/hi Far maajo oo ku sugan M/Boosaaso ee a G/Bari ayaa khudbad uu ka jeediyay ku lan qada sharaf ahaa oo shalay ku soo gabagabowday magaaladaas ayaa she eg ay in dhammaan dardaarankii odaya asha ay dhaqan galin doonaan.
Md.Farmaajo ayaa sheegay in uu tagi doono dhammaan maamul goboleedya da socdaalkiisan nabadeenta ahna uu ku xoojin doono Fedaraalka iyo xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya maamul goboleedyada taasina ay horseedi doon to dowladnimo waarta iyo isku duubni shacab oo ay kow ka yihiin Maamul go boleedyda.
Madaxweynha iyo wafdigiisa ayaa si wanaagsan loogu soo dhaweeyay M/B oosaaso iyada la fil ayo in sodaa lkiisa uu hlkaas ka sii wadan doono isla mar kaana maalinta bari ah ee ugu soo horey sa uu gaari doono M/Gaalkacyo ee xarunta G/ Mudug.
Dhanka Kale Magaaladaasi Waxaa Gaaray Madaxweynaha Maamulka Gal mudug Axmed Duca ale Geela Xaaf si uu maanta uu ugu soo dhaweeyo Mad axweynaha JFS Oo kusoo wajahan.
AXMED MADOOBE OO ISKU SHAANDH EYN KU SAMEEYNAYA GOLAHISA WASIIR ADA &WASIIR AAD UGU DHAW OO LAGA WEYN DOONO?
wararka laga helayo Magaalada Kis maayo Ee Xarunta u ah Maamulka Jub baland ayaa waxay sheegayaan in dha waan madaxweynaha Maamulkaasi Ax med Maxemd Islaam Madoobe uu isku Shaandheyn ku sameeyn doono Gol ahiisa wasiirada.
Isku Shaandheynta ayaa la tilmaama yaa in Axmed Madoobe uu Qorsheynay ay maalmihii u da mbeeyay iyadoo qaar kamid ah golaha wasiirada laga yaabo in ay gabi ahaanba xilalkooda waayan , qaar cusub lagu soo daro iyadoo qaar kale oo hadda ah wasiiro la sheegayo in xilalka loo kala bad ali doono.
Wasiirada xilkooda weyn doona ayaa Waxaa warar hoose sheegayaan in uu kamid yahay wasiir ka Amniga ee Jubba land C/rashiid janan oo Dhawaan agay M/BeladXaawo ee gobalka Gedo.Sidoo kale wasiiro ku dhaw dhaw siyaasad ahaan Axmed Madoobe ayaa laga yaa ba inay xilkooda waa yan.
DAB XALAY KA KACAY WARSHADDA ISBUUYADA MUBAARAK XARUNTEEDA DAGMADA HILIWAA
Wararka naga soo gaaraya Dagmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir waxaa sheegayaan in Xalay dab uu ka kacay warshadda isbuunyada Mubaarak xar unteeda dagmada hiliwaa ee M/Muqd isho. Goobjooge ku sugan nawaaxiga xarunta ayaa Dalsan usheegay in dabku wali uu olalayo isla mar kaana ay soo geereen ciidamada amniga dagmada iyo gawaarida dab damiska ah ee gob olka banaadir iyo kuwa shirkadda isgaa rsiinta Hormuud iyada oo aan wali lagu guulaysan bakhjiitinta Dabkaas.
Waxaana wali la ogeyn sababta ra smiga ah ee keentay in dabkaasi uu kac o sida warbaahintu u xaqiijiyeen masu uliyiin ka tirsan Warshadda isbuunyada Mubaarak, sidoo kale Waxaa wali la og ayn Khasaaraha nafeed marka laga soo tago in uu jiro mid hantiyadeed.
Saameynta ugu badan waxa uu soo gaaray Schoolka Hooyga Xamar iyo Guryihii kale ee ka ag dhawaa Xarunta Waana Markii labaad ee xarunta war shadaasi uu qabsado dab.
SOOMAALIYA IYO TURKIGA OO HESHIIS KALA SAXIIXDAY
R/Wasaare ku xigeenka XFS Md. Ma hdi Mohammed Guleed (Khad ar) iyo wefti uu hogaamina ayo oo 2 ma alin ka hor gaaray M/Ankara ee dalka Turkiga ayaa shalay heshiis la saxiixd ay Mas uuliyiin ka tirsan Dowladda Tur kiga. Md. Mahdi ayaa wafdigiisa waxa ay ka kooban yihiin 13 xubno od oo ka socda 13 wasaradood iyo 4 wasiir oo uu ugu horeeyo Wasiirka Cusub ee Gan acsiga iyo Warshadaha Maxamed Ca bdi Xayir (Maareeye),
Md.Mahdi iyo wafdigiisa ayaa waxa ay Magaalada Ankara uga qeyb gaeen Shirka Iskaashiga Ganacsiga Soomaal iya iyo Turkeyga oo markii ugu horreys ay ka dhacay dalka Turkey. Ra’iisul Wa saare ku xigeenka Soomaaliya iyo dhigi isa dalka turkiga ayaa shalay kala saxii xday heshiis ku saa bsan iska ashiga Ganacsiga labada Dowladood, waxaa na goobjoog ka ahaa masuuliyiin labada Dowladood ka kala tirsan.
Heshiiskan iskaashi ayaa Dhigaya In Soomaaliya suuq ku yeelato Turkiga si Ganacsiga Soom aaliya loo gaarsiiyo Yu rub iyo Asia Sidoo kale Turkiga waxay qaadan donaan oo Suuq u yeeli dona an Khayraadka Somalia sida Kaluumaysi ga, Beeraha iyo Xoolaha.
Turkiga waxay iibsan doonaan oo ay la wareegi doonaan Mooska, Liinta la qalajiyay, Sisinta iyo Kaluunka waxaana heshiiskan kala saxiixday labada Ra’ii sal Wasaare ku xigeen ee Soomaaliya iyo Turkiga.
SHIRKA GOLAHA WASIIRADDA OO LOOGU HADLAY AMNIGA SHARCIGA SHAQAALA HA RAYIDKA AH IYO ARRIMO KALE
R/w XFS Md. Kheyre, ayaa Khamiistii shir guddoomiyey kulanka Khamiislaha ah ee G/Wasiiradda Soomaaliya oo loo ga hadlay qodobo ay kamid yihiin Xaala dda Amniga dalka, Sharciga Shaqaal aha Rayidka ah iyo arrimo kale, waxaa na warbixino looga dhageystay kulanka asi Wasiirada Amn iga gudaha iyo G/ Shaandhigga dalka Md.Yariisoow, ayaa warbaahinta uga warb ixiyey kulanka Gol ahaasi ay yeesheen, waxaana uu sheegay in Golaha warbixinadii lasoo hordhigay ee Amniga ku sa absan ay ka mid yihiin in Shaqsi 60 jir ah oo ku nool G/Sh/hoose uu la dagaa lamay Ciidamo Alshab aab ka tirsan, ka dib markii ay isku dayeen inay ka qaa daan Lacago baad ah, islamarkaana uu iska dhiciyey.
"Golaha waxay warbixino ku aaddan xaaladda dalka uu marayo ka dhageys teen Wasiiradda Am niga iyo Gaashaan dhigga, iyaggoo sheegay in ay socdaan dadaalo badan oo amniga ku saabsan, lana sii kordhin doono, Wasiirka Amniga waxuu uga mahad celiyey shacabka So omaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan hay ’addaha Amaanka iyo xogaha ay siiy aan, sidoo kale waxa uu xusay Shaqsi Lixdan jir ah oo jooga G/Sh/hoose inuu la dagaalay Maleeshiyada Alshabaab, iskana dhiciyey, taas na waxay ku tusin eysaa in Shacabka uu u istaagay in am nigooda ay ilaashadaan” ayuu yiri Was iir Eng Yariisoow Wasiirka oo sii hadlay ey, ayaa sheegay in sidoo kale Golaha wasiiradda ay warbixin ka dhageysteen Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumad da Soomaaliya, isaggoo golaha u shee gay in wasaaradda ay wado dadaalo dib u habeyn loogu sameynayo Wasaarad da Difaaca iyo howlahe eda.
”Wasiirka Gaashaandhigga waxuu ka hadlay dib u habeyn lagu sameynayo Wasaaradda gaasha andhigga iyo Howl aheeda, ha noqoto qorshaha u dagsan iyo Xeerka anshaxa Ciidanka Xoogga dalka oo isaguna si wanaagsan u so cdo, intaas ka dib wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshadda ay aa waxuu soo ho rdhigay GWS Sharciga shaqaalaha Ray idka ee Dowladda oo dib u habeyn lagu sameeyey” siddaasi waxaa yiri Wasiirka Warfaafinta Sooma aliya.
MAANE FACEBOOK ISKAHELAY OO LIX MAALO OD KA DIBNA IS GUURSAY
Qof kaste oo Facebook isticmaala wuxuu arkaa waxyaabo uu la yaabo. Waxaa ka mid noqon kara dad aadan aqoonin oo kugu soo darsada, qol ay koox furatay oo xubin lagaa dhigo adigoon dal banin iyo qoraallo iyo sawirro lagula wadaago adigoo aan rabin.
Laakiin nin Nigeria u dhash ay ayaa heer cusub gaarsiiy ay layaabkii markii uu soo ba ndhigay xayaysiin aan caadi ahayn.
Chidimma Amedu ayaa qo raal soo dhigay Facebook 30 Disembar, isaga oo dumarka waydiistay in ay la soo xiriir aan haddii ay guur diyaar u yihiin, sida uu BBCda u sheegay.
"Ma yari oo wakhti badan baan soo no olaa, arrintaasna ma qarinayo, diyaar baana u ahay in aan qirto. Wakhti dambana iskama luminayo.”
"Isoo dira codsiyadiina – gabadha ugu dhibco badata ay aana guursan doonaa lixda bisha Jana ayo ee 2018ka. Soo gudbinta codsiga wuxuu ku egyahay saqda dhexe ee 31/12/ 2017,” sidaa ayuu Facebook ku qoray.
Markale ayuu qoraal kale ku xoojiyay isaga oo yiiri
"Arrintan waa iga dhab, haddaba ha oranin qoraalkaaga ma arkin. Nasiib wanaagsan.
Dhawr ruux ayaa qoraalkaas uga soo jawaabay, laakiin waxaa dareenkiisa soo jiitay midda uga timid Sophy Ijeoma
Waxay u qortay "Anigaa ku danaynaya…….. ceeb..” astaan ta qosolka ee lols ayayna sii raacisay.
Markii hore waxay la ahayd kaftan, waxayna qoraalkaas u qortay in sheekadu sii socoto oo kali ah.
NIN MEELI U CADDAHAY
Farriin gaar ah ayuu u diray ka dibna Facebook ayuu ka wacay kaas oo bog cusub u furay noloshii gabadha.
Labo maalmood ka dib markii ay sheekadii u horraysay dhex martay, wuxuu galay safar 500km ah, wuxuu ka baxay Abuja oo deggan yahay, si uu u tago Enugu oo ay gabadhu ku nooshahay.
Waxay ku sugaysay bannaanka dukaan tafaariiqda lagu ga do waxayna kulankoodii koobaad ku tilmaantay "jacaylkii arag tida ka billawday”. "Waa ninkii dunida ugu quruxd badnaa ee aan waligay la kulmo. Markaan arkayba waan ka helay”. ayay tiri
Ka dib labo saac oo ay wadahadal "adag” yeesheen wuxuu ka dalbaday in ay la booqato adeerkii oo ay gabadha isku ma gaalo ku nool yihiin.
Markaas waxaa la waydiiyay waxa madaxeeda ka guuxaya, waxayna tiri kaftan kaftan ayay ila yara tahay, laakiin way ku faraxsanayd in Chidimma uu hawsha si wanaagsan u waday
Dhaqanka iyo casriga kulmay
"Waxaan galnay guriga adeerkii wuxuu yiri: ‘adeer waatan gabdha aan rabo in aan guursado.” Chidimma qoyskiisana hawsha dib ma aysan u sii dhigin adeerkiisana wuu ku
Raacay.Dhaqanka Igbo waxaa qayb muhiim ah ka ah in qoy skaagu ay ku qancaan gabadha aad nolosha wadaageysaan.
In aad xayaysiin Facebook soo dhigto gabdhihii kuu soo jaw aabay mid ka mid ahna aad maalinta lixaad guursato arrin sahlan ma aha. haddaba side ed u guursan kartaa qof aad ha dda uun is barateen?
Gabadhu kama hadlayso in ay xataa halmar isu soo dhow aadeen, balse waxaa ka muuq atay ka go’naansho.
Waxay tiri "markii u horray say een arkayba waan ka hel ay, balse ma ogayn sida ay uga go’antahay in uu i guursado,”
"Markii aan adeerkii iyo xaask iisa u tagnay ayay ii xaqiiqaw day in arrintaasi ay rumoobi kar to waana rabay” ayay intaas ku sii dartay.
Markaan walwalku xageeda ayuu u ciiray oo waa in ay qoy skeeduna ogolaadaan guurka nin ay Facebook uun isku ark een. Laakiin dardartii ay ku socdeen ma aysan joojinin. Maa daama ay kulm een aragtidii koobaadna ay ku jeclaatay, Chidi mma adeerkiina soo dhaweeyay, markaas ayayna go’aan sadeen in ay booqdaan qoyska Sophy isla maalintaas.
Sophy aabaheed wuu dhintay marka hooyadeedna waxay tiri anigu hawshaas ma gali karo ee walaalkaa kaa wayn haku bixiyo.
Markaas haddii walaalkeed ogolaado hawshii qoysas kooda ayaa dhan uga dhacday. Markii uu dhawr su’aalood waydiiyayna wuu bixiyay, sidaas daraadeed waxay noqdeen dad si rasmi ah isugu doonan, si ay lix maalmood gudahood isugu guursadaan.
Sophy ayaa la waydiiyay in ay ku dagdageen balse way dii day arrintaas, waxayna tiri: "waad qaa dan haddii aad aragto wixii aad u baahnayd.”
In ka badan hal sano ayay saaxiib ku ahaayeen Faceebok, balse xayaysiinta guurka ka hor ma ay san kulmin mana ays an wada hadlin, kaftankii waan ku xiisaynayaa ahaa ayuuna qoys cusub ka dhashay.
MA ISKU NAGAAN DOONAAN?
LAMMAANAHA LIXDII BISHAN?
TACSI TIIRANYO LEH
Dhammaan Reer Maxamed Jimcaale Cigalle, Reer Axmed Jimcaale Cigalle, Reer Muxumed Jimcaale Cigalle, Reer xuseen Jimcaale Cigalle,,Ilmo Aamino Jimcaale Cigalle, Ilmo Mumino Jimcaale Cigalle, Ilmo Madiino,Jimcaale Cigalle, Ilmo Nuurto Jimcaale Cigalle, Dhammaan Reer Cigalle Gadiid Gee ddow waxaay Tacsi Tiiraanyo leh u dirayaan Dhammaan Ilmo Reer Xasan Jimcaale Cigalle iyo Caruurta ay ka Geeriyootay MarxuumadMaka Xasan Jimcaale oo ku Geeriyootay Dorr aad Xaafadda Buula xuubeey ee dageyada Wadajir ee Magaalada Muqdisho waxayna Alle ugu baryayaan marxuum ad inuu alle u Naxariisto Qosyka iyo Qaraabada ay ka tagtayna uu samir iyo imaan sadaq ah uu kasiiyo
INNAALILLAAHI WA INYA ILAAHI RAAJICUUN
.. Aamiin Aamiin Aamiin